Fanapahan-kevitra momba ny marketing an-tserasera 5 ho an'ny 2014 | Martech Zone
Alatsinainy Janoary 27, 2014 Alahady 26 Janoary 2014 Brian Hoffman
Ny fiantombohan'ny taona vaovao dia mitondra drafitra marketing, teti-bola vaovao ary fientanam-po indray manoloana ireo fotoana miandry ny orinasa rehetra. Raha tompon'andraikitra amin'ny marketing amin'ny orinasanao ianao, dia mety ho lehibe tokoa ny mety ho izy. Soa ihany, manana sosokevitra vitsivitsy izahay hanampy anao hampitombo ny marikao sy hanaraka amin'ny Internet amin'ny taona 2014. Ity misy fanapahan-kevitra 5 momba ny varotra an-tserasera horaisina anio:
1. Ampio ny atiny Marketing
Mitadiava ny taona 2014 ho taona iray hafa hanatsaran'ireo orinasa ny marketing. Ny fakana an'ity fanambarana ity dia ny fotoana ilain'ny mpivarotra fotoana sy fitaovana hamokarana atiny tsy manam-paharoa hitantara tantara iray izay mampiavaka ny orinasa. Ho an'ireo orinasa madinidinika rehetra izay tsy maintsy mitady ny lalan-kalehany mankany amin'ny fampahalalam-baovao ho an'ny mpanjifa, dia ilaina ny fananan'ny atiny feo manintona. Ny orinasa lehibe dia manana loharano hamelezana gadona maharitra amin'ny famoahana atiny imbetsaka isan'andro. Izany dia nilaza fa tsy zava-dehibe ny manaraka hatrany ny metrik'i Jones satria ny 9% -n'ny B2B sy 7% -n'ny orinasa B2C ihany no mihevitra ny paikadin'izy ireo “mandaitra” Ny fanamafisana ny mampiavaka ny atiny dia hiantoka fitomboana tsy tapaka amin'ny media sosialy manaraka.
2. Ataovy laharam-pahamehana ny finday
Ny fanatsarana ny atiny ho an'ny fampiasana finday dia zava-dehibe kokoa noho ny teo aloha. Raha mijery ny fironana tsy miovaova amin'ny finday hatramin'ny 2017 ny 87% amin'ireo fitaovana mifandray rehetra dia ho finday finday sy tablette. Ny zavatra voalohany hasiahana dia ny famolavolana tranonkala mamaly ka ny pejy web dia hohatsaraina mba hojerena amin'ny fitaovana rehetra. Manaraka izany dia misy mpampitohy mpampiasa madio sy tsotra hanampiana ny olona hitazona ny pejinao. Manantena ny hahita valiny haingana sy mora ireo mpampiasa finday satria mandeha foana izy ireo. Raha ataonao mora ny fitetezana ny valintenin'izy ireo dia hiverina izy ireo.
3. Aparitaho ny elatrao amin'ny haino aman-jery sosialy
Ny fanandramana amin'ny haino aman-jery sosialy dia ho zava-dehibe amin'ny 2014 fa ireo goavambe sosialy roa, Twitter sy Facebook, dia "mandoa vola hilalao" ary ny lahatsoratra iray dia hijanona mandritra ny minitra vitsy monja, raha tsy segondra. Makà fotoana hanandramana amin'ny tamba-jotra hafa toy ny Pinterest, Instagram ary Tumbler. Ireo tranonkala rehetra ireo dia mitombo amin'ny hafainganam-pandeha Warp ary manana ny fahaizana mifandray amin'ireo mpanaraka amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra mamorona sy azo zahana olona ianao. Google Plus dia tambajotra iray hafa namboarina hanatsara ny laharan'izy ireo amin'ny tontolon'ny media sosialy amin'ity taona ity. Mety ho sarotra ny mahita ny akany sahaza azy ao amin'ny Google Plus, fa ny soa azo avy amin'ny valin'ny motera ambony dia hanampy hatrany.
4. Lazao Amin'ny Sary
Ny Herin'ny sary sy horonan-tsary dia mahavariana an'ireo mpivarotra an-tserasera. Raha ny tena izy, ny tranonkala dia manova ny sain'ny rehetra amin'ny sehatry ny fahitana. Ohatra, ny sary ao amin'ny Facebook dia mahazo sitraka, fanehoan-kevitra ary fizarana bebe kokoa noho ny endrika fifandraisana hafa. Ho fanampin'izay, Google dia nanova ny valin'ny fikarohana mba hampiroboroboana ny sary ambonin'ny valin'ny lahatsoratra. Raha ny marina, ny fitiavana ananan'ny mpanjifa amin'ny vatomamy maso dia mety noho ny antony nahatonga anao nanindry hijery ity sary ity.
5. Ataovy tsotra
Raha misy zavatra iray hisarika ny sain'ny olona amin'ity taona ity dia hafatra tsotra izany. Aza atao be pitsiny loatra ny atiny. Ireo orinasa nanatsotra ny fanapaha-kevitry ny fividianana (midika hoe namoaka jargon-n'ny indostria) dia 86% no mety hampiova ny mpanjifa.
Tags: Content MarketingSary torohayFivarotana finday sy tabletteSocial Media Marketing
Brian dia mpandrindra marketing ao Mpamono Infografika, fanombohana monina ao Seattle manokana amin'ny famolavolana infografika, sary mihetsika, ary sary mifanerasera. Killer Infographics dia mirehareha amin'ny fisintomana talenta ambony afaka manome kopia feno, angon-drakitra iray manokana, fanoharana manokana ary fampiroboroboana stratejika. Brian dia nihalehibe tany an-tendrombohitra Pennsylvania sy Vermont, ary mandany isan'andro afaka manao snowboarding sy mitsangantsangana any an-tendrombohitra avaratrandrefan'ny Pasifika.